Dhaawacyadii Qaraxii Isgoyska Zoobe oo loo qaaday dalka Turkiga[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Dhaawacyadii Qaraxii Isgoyska Zoobe oo loo qaaday dalka Turkiga[Sawirro]
MUQDISHO – Dhaawacyadii qaar kamid ah dadkii waxyeeladu kasoo gaartay qaraxii Isgoyska Zoobe ayaa maanta loo qaaday dalka Turkiga iyadoona diyaarad ay leeyihiin ciidamada Turkigu ka qaaday garoonka Muqdisho,waxaana la geyn doonaa Isbitaal ay leeyihiin ciidamadu.
Dadka dhaawacyadoodu cuslaayeen ee la qaaday ayaa gaarayey 40 qof ,waxaana xiliga la qaadayey garoonka ku sugnaa Ra’iisal Wasaare Khayre iyo qaar kamid ah golihiisa Wasiirada.
Wasiirka Caafimaadka dalka Turkiga oo weheliyaan dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho,si ay u caawiyaan dadka ku dhaawacmay qaraxa.
Dhaawacyada ayaa lagu qaaday diyaarad qaas ah oo ay leeyihiin Ciidamadda Turkigu, waxaana ka hor inta aan la qaadin dhaawacyada uu Ra’iisul Wasaaruhu la kulmay Wasiirka Caafimaadka Turkiga oo ay wehliyaan Dhaqaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad oo u yimid dalka iney ka qeyb qaataan gurmadka loo fidinayo dhaawacyada shacabka Soomaaliyeed ee xasuuqa ba’an u geysteen kooxaha shar-wadayaasha ah.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa Turkiga uga mahadceliyey gacantooda walaaltinimo ee mar walba ay soo gaarto Soomaaliya, xili dadku u baahan yihiin gurmad. Wuxuna tilmaamay in ay ka go’antahay daryeel u fidinta shacabka ku soo dhaawacmay Qaraxii 14-kii October.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku jirta xaalad gurmad iyo baroor diiq qaran ,waxaana la joojiyay dhammaan howlihii caadiga ahaa ee Wasaaradaha ,waxaana la ballaariyay gurmadka dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay qaraxii Zoobe.